मटर र टर्की प्यूरी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
Verduras32 मिनेट1 व्यक्ति250२ क्यालोरी
यो मटर र टर्की प्यूरीको साथ तपाईले यो निश्चित गर्नुहुन्छ कि तपाइँको बच्चा ले लगिरहेको छ कब्जसँग लड्न फाइबर
सामान्यतया, months महिना पछि, बच्चाहरूको आहारमा मटर। जे होस्, सँधै, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईको बाल चिकित्सकले तपाईंलाई अघि बढ्नुहोस्।
मटर, यदि तिनीहरू हरियो छ भने पनि फलफूलको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ र बच्चामा निर्भर गर्दै यसलाई पचाउन अझ बढी खर्च लाग्न सक्छ। तपाईंले चलाउन सक्ने एक ट्रिक मटर पकाउनु र छालालाई बाँकी सामग्रीसँग मिस्याउनु अघि यसलाई हटाउनु हो। यस तरिकाले तपाईं फाइबरको अंश हटाउँदै हुनुहुन्छ, अघुलनशील, अझै बाँकी छ घुलनशील फाइबर पचाउन सजिलो।
सधैँ जस्तो तपाई आफ्नो प्यूरी घनत्व दिन सक्नुहुन्छ। मेरो केसमा, मैले यसलाई डेन्सर बनावटको साथ छोडिदिएँ ताकि यसको बानी हुन्छ नयाँ बनावट। यस तरिका बाट हामी बाट पास गर्न को लागी व्यवस्थापन अति उत्तम दलिया बनावट ठोस खाना।
तपाईं यो मटर र टर्की प्यूरी पनि कुखुराको साथ तयार गर्न सक्नुहुनेछ ताकि यसको खाना अधिक विविध छ।
1 मटर र टर्की प्यूरी
1.4 यस रेसिपीलाई तपाइँको Thermomix मोडेलमा अनुकूलन गर्नुहोस्
एक प्यूरी जसले तपाईंलाई शिशुको आहारमा फलफूलहरू समावेश गर्न मद्दत गर्दछ।
G ० ग्राम स्थिर मटर
बच्चा खानाको लागि उपयुक्त वनस्पति ब्रोथको १ 150० ग्राम
70 ग्राम टर्की स्तन
हामीले गिलासमा जैतुनको तेल हालेर यसलाई तात्यौं १ मिनेट, भेरोमा तापमान, गति 1।
अर्को हामी प्याजको साथ सफा र धोइएको चुहावट राख्यौं। हामी दौरान काट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 5। हामी ब्लेड तिर टुक्रा कम र फ्राई को लागी Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
मटर थप्नुहोस् र तिनीहरूलाई पनी जारी राख्नुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
तातो तरकारी ब्रोथ जोड्नुहोस् र मटर पकाउन Minutes मिनेट, १००º, गति १।
अन्तमा, हामीले टर्कीको स्तनलाई सानो टुक्रामा राख्यौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समयको अन्त्यमा हामी पिँच्दछौं Seconds० सेकेन्ड, गति 30।
यदि तपाईं एक उत्तम पोर्रिज चाहनुहुन्छ भने, पानीको छप्पर जोड्नुहोस् र seconds० सेकेन्डको लागि फेरि ब्लेन्ड गर्नुहोस्, स्पीड--30।
थप जानकारी - मेरो पहिलो कुखुरा र चामल दलिया
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, Months महिना देखि १ बर्ष सम्म, तरकारीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु » Months महिना देखि १ बर्ष सम्म » मटर र टर्की प्यूरी
तर धान धान्न सकिन्छ? र यो राम्रो देखिन्छ? म सधैं चावल र आलु संग हिचकिचाउँछु।
नुस्खा को लागी धेरै धन्यवाद!
तपाईंले मलाई अना माफ गर्नुहुनेछ तर यस विधिमा भात वा आलु समावेश हुँदैन! 😀
जे भए पनि म तपाईंलाई भन्नेछु कि केहि समय जुन म चामल फ्रिज गर्छु राम्रो रहन्छ। अर्कोतर्फ, आलुहरूले प्राय: त्यसो गर्दैन किनभने यसको अनौंठो स्वाद हुन्छ।
नमस्कार !! के त्यहाँ समस्या छ यदि मैले दोब्बर भाग बनाएँ र यसलाई एक दिनको लागि फ्रिजमा राखें? शुद्ध भोली राम्रो हुन्छ? धन्यबाद